Isbitaalka degmadda Udevala oo tarjumaaano soomaalida ka mid tahay shaqaaleeysiiyey | Somaliska
Hey’addaha xagga caafimaadka u qaabilsan deegaanadda hoos taga gobolka Uddevalla iyo agagaarkeed ayaa mrkii ugu horeeysay shaqaaliisiiyey soomaali tarjumaano iyo carab iskugu jiro, kuwaas oo qeyb ka noqonaya fududeeynta daryeelka caafimaad ee bukaanka soo booqda ee aan aqoon luqada iswiidhish-ka ah.
Shaqaalahan soomaalida ah ayaa tan iyo bilowigii bishan dhamaadka ah ee diseembar ka howl galayey isbitaalkaasi. Fikirka howlgelinta tarjumaanada soomaalida ah ayaa waxaa ka dambeeysay dhaqtaradda dhalaanka iyo hooyada ee Elizabeth Franklin oo sheegtay in fikradan ay ka soo heshay isbitaalka ku yaala jasiiradda Malta, halkaas oo ay joogaan tarjumaano afaf qalaad ku hadla.
“Howlwadeenadda caafimaadka iyo bukaanka kolka ay is fahmi waayeen, waa arrin murug leh ayey tiri iyadoo farta ku fiiqeeysa baahida xagga isfahanka ah iyo dhibaatadda ay reebto. Tarjumaanadan soomaalida ah islamarkaasina ah gabdho ayaa ka howlaya xarrumaha Jiinokolooga qaabilsan haweenka.
“Haweenka wadanka ku cusub weey ku adag tahay, kolkeey daryeel caafimaad soo raadsadaan, waxaa dhacda in dhowr jeer soo laa laabta sababo la xirriira iyagga iyo shaqaalaha caafimaadka oo aan is fahmin” ayey tiri Elizabeth oo sharazaad ka bixineeysay sida uu isku dhac labbo dhaqan u keeno.
“Waxaan kolkii hore tarjumaanada ku balansan jirnay xagga taleefanka, culus dhinacaas ka yimid ayaa hadda waxaanu shaqaaleeysiinay tarjumaano xitaa bukaanka la kulmi karaan ka hor intaan dhaqtarka u soo gudbin iyadoo fursad misna u helaya in wixii su,aalo iyo fikraddo xagga caafimaadka ku saabsan sii weeydiin karaan” ayey tiri markale Elizabeth.
Ugu dambeyntiina tarjumaanada soomaalida iyo carabta ah ayaa ah kuwo heeysta aqoon xagga caafimaadka ah oo loo sii tababaray,kuwaas oo haatan saacado badan ka howlaha qeybta hooyadda iyo dhalaanka. Waxaana ay tani aad u soo dhaweeyey guud ahaan howlwadeenada isbitaaladda oo dareemay in culus badan ka dagay macno weyna ay u sameeneyso howsha ay hayaan.
masha allah waa wax lagu farxo ,
aad ban ugu hanbalyaynayaa gabdhahaas walalahaygaa